သင့်ရဲ့ အွန်လိုင်း အကောင့်များကို လုံခြုံရေး နှစ်ထပ်ဖြင့် ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလဲ? – DigitalTimes.com.mm
သင့်ရဲ့ အွန်လိုင်း အကောင့်များကို လုံခြုံရေး နှစ်ထပ်ဖြင့် ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလဲ?
Ko Thuya Jun 02, 2018
သင့်ရဲ့ အွန်လိုင်း အကောင့်များဟာ ဟက်ခံရနိုင်ခြေများတဲ့အတွက် လုံခြုံရေး နှစ်ထပ်ဖြင့် ကာကွယ်ထားသင့်ပါတယ်။ အဲဒီ နည်းစနစ်ကို Two-Factor Authentication , Two-Step Verification or 2FA လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။ ဒီနည်းစနစ်က သင့် ဖုန်းကို ဒုတိယ Password အဖြစ် အသုံးပြုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် သင့်ရဲ့ မူလ Password ကို အခြားလူများက သိသွားသည့်တိုင် သူတို့မှာ သင့်ဖုန်း မရှိတဲ့အတွက် သင့်အကောင့်ကို ၀င်လို့ မရတော့ပါဘူး။
ဒီနည်းစနစ်ကို အသုံးပြုရင် သင့်အကောင့်များကို Login ၀င်တဲ့ အခါမှာ သာမာန်အတိုင်း Username , Password ထည့်ပေးရမှာပါ။ အဲဒီနောက်မှာ သင့်ဖုန်းထံ ဒုတိယ Password ကို ပေးပို့ပေးမှာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီ Password ကို ထည့်ပေးမှသာ Login ၀င်နိုင်မှာပါ။
Apple က User အကောင့်များကို လုံခြုံရေး နှစ်ထပ်ဖြင့် ကာကွယ်နိုင်အောင် ပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ iOS9၊ Mac OS X El Capitan နဲ့ သူ့အထက်မှာ ဒီနည်းစနစ်ကို Setup လုပ်နိုင်ပါတယ်။
iOS Version အပေါ် မူတည်ပြီး ပြုလုပ်နည်း အနည်းငယ်ကွာခြားပါတယ်။ iOS 10.3 နဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ Settings> [Your Name] > Password & Security ထဲမှာ သင့် Apple ID ကို 2FA နဲ့ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ iOS 10.2 နဲ့ အရှေ့ပိုင်း ဗားရှင်းများမှာ iCloud> Apple ID> Password & Security ထဲမှာ ပြုလုပ်ရမှာပါ။
စကရင်ရဲ့ ဘယ်ဘက် အပေါ်ထိပ်မှ Apple Icon ကို နှိပ်ပါ။ System Preferences > iCloud > Account Details ထဲသွားပါ။ Security ထဲမှာ 2FA ကို Enable လုပ်ပါ။
Settings> Security ထဲသွားပါ။ 2FA ကို Enable လုပ်ပါ။ သင် Login ၀င်တိုင်း သင့်ဖုန်းထံ ကုဒ် ပေးပို့ဖို့အတွက် သင့်ဖုန်းကို မှတ်ပုံတင်ပေးရမှာပါ။ အဲဒီမှာ USB , NFC , Recovery Code များဖြင့် Login ၀င်နိုင်အောင် သတ်မှတ်နိုင်ပြီး အဲဒီ နည်းလမ်းများဟာ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှု မရချိန်မှာ အသုံးဝင်ပါတယ်။
Gmail, YouTube, Google Maps အပါအ၀င် Google အကောင့်ကို 2FA ခံချင်ရင် ဒီလင့်ကို နှိပ်ပါ။ သင့် အကောင့်ကို Login ၀င်ပါ။ အဲဒီနောက်မှာ ကုဒ်များ ပေးပို့ဖို့အတွက် သင့်ဖုန်းကို မှတ်ပုံတင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုဘိုင်း ဆက်သွယ်မှု မရချိန်မှာ Login ၀င်နိုင်အောင် Backup codes များကို သတ်မှတ်ထားပါ။ Backup code ၁၀ ခုကို ဖန်တီးထားနိုင်ပြီး တစ်ခုကို တစ်ခါသာ သုံးနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ Microsoft အကောင့်ကို Login ၀င်ပါ။ Security Settings ထဲသွားပြီး 2FA ကို Enable လုပ်ပါ။ အပေါ်ကလိုပဲ သင့်ဖုန်းကို မှတ်ပုံတင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုဘိုင်း ကွန်ရက် မရချိန်မှာ သုံးဖို့ App passwords များကို ဖန်တီးထားပါ။ App password တစ်ခုကို တစ်ကြိမ်သာ သုံးနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ Dropbox အကောင့်ကို Login ၀င်ပါ။ Settings> Security ထဲသွားပြီး Two-Step Verification ကို Enable လုပ်ပါ။ သင့်ဖုန်းကို မှတ်ပုံတင်ပေးပါ။
ခရီးသွားတဲ့ အခါ ၊ မိုဘိုင်း ဆက်သွယ်မှု မရတဲ့ အခါများမှာ သင့်ဖုန်းကနေ ဒုတိယ Password or Code ကို မရရှိနိုင်ပါဘူး။ အဲဒီ အခြေအနေမှာ အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Recovery code, Backup codes, App passwords များကို သုံးနိုင်သလို နောက်ထပ် ရွေးချယ်စရာ တစ်ခုက Authenticator Apps များ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ App များက မိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှု မလိုအပ်ဘဲ သင့် ဖုန်းမှာ ဒုတိယ Password များကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။ Android အတွက် Google Authenticator , Authy နဲ့ iOS အတွက် HDE OTP ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ Facebook Mobile App များမှာတော့ Code Generator ပါရှိပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
သငျ့ရဲ့ အှနျလိုငျး အကောငျ့မြားကို လုံခွုံရေး နှဈထပျဖွငျ့ ဘယျလို ကာကှယျရမလဲ?
သငျ့ရဲ့ အှနျလိုငျး အကောငျ့မြားဟာ ဟကျခံရနိုငျခွမြေားတဲ့အတှကျ လုံခွုံရေး နှဈထပျဖွငျ့ ကာကှယျထားသငျ့ပါတယျ။ အဲဒီ နညျးစနဈကို Two-Factor Authentication , Two-Step Verification or 2FA လို့လညျး ချေါကွပါတယျ။ ဒီနညျးစနဈက သငျ့ ဖုနျးကို ဒုတိယ Password အဖွဈ အသုံးပွုတာ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီအတှကျ သငျ့ရဲ့ မူလ Password ကို အခွားလူမြားက သိသှားသညျ့တိုငျ သူတို့မှာ သငျ့ဖုနျး မရှိတဲ့အတှကျ သငျ့အကောငျ့ကို ဝငျလို့ မရတော့ပါဘူး။
ဒီနညျးစနဈကို အသုံးပွုရငျ သငျ့အကောငျ့မြားကို Login ဝငျတဲ့ အခါမှာ သာမာနျအတိုငျး Username , Password ထညျ့ပေးရမှာပါ။ အဲဒီနောကျမှာ သငျ့ဖုနျးထံ ဒုတိယ Password ကို ပေးပို့ပေးမှာ ဖွဈပွီး အဲဒီ Password ကို ထညျ့ပေးမှသာ Login ဝငျနိုငျမှာပါ။
Apple က User အကောငျ့မြားကို လုံခွုံရေး နှဈထပျဖွငျ့ ကာကှယျနိုငျအောငျ ပံ့ပိုးပေးထားပါတယျ။ iOS9၊ Mac OS X El Capitan နဲ့ သူ့အထကျမှာ ဒီနညျးစနဈကို Setup လုပျနိုငျပါတယျ။
iOS Version အပျေါ မူတညျပွီး ပွုလုပျနညျး အနညျးငယျကှာခွားပါတယျ။ iOS 10.3 နဲ့ နောကျပိုငျးမှာ Settings> [Your Name] > Password & Security ထဲမှာ သငျ့ Apple ID ကို 2FA နဲ့ ကာကှယျနိုငျပါတယျ။ iOS 10.2 နဲ့ အရှပေို့ငျး ဗားရှငျးမြားမှာ iCloud> Apple ID> Password & Security ထဲမှာ ပွုလုပျရမှာပါ။
စကရငျရဲ့ ဘယျဘကျ အပျေါထိပျမှ Apple Icon ကို နှိပျပါ။ System Preferences > iCloud > Account Details ထဲသှားပါ။ Security ထဲမှာ 2FA ကို Enable လုပျပါ။
Settings> Security ထဲသှားပါ။ 2FA ကို Enable လုပျပါ။ သငျ Login ဝငျတိုငျး သငျ့ဖုနျးထံ ကုဒျ ပေးပို့ဖို့အတှကျ သငျ့ဖုနျးကို မှတျပုံတငျပေးရမှာပါ။ အဲဒီမှာ USB , NFC , Recovery Code မြားဖွငျ့ Login ဝငျနိုငျအောငျ သတျမှတျနိုငျပွီး အဲဒီ နညျးလမျးမြားဟာ မိုဘိုငျးဆကျသှယျမှု မရခြိနျမှာ အသုံးဝငျပါတယျ။
Gmail, YouTube, Google Maps အပါအဝငျ Google အကောငျ့ကို 2FA ခံခငျြရငျ ဒီလငျ့ကို နှိပျပါ။ သငျ့ အကောငျ့ကို Login ဝငျပါ။ အဲဒီနောကျမှာ ကုဒျမြား ပေးပို့ဖို့အတှကျ သငျ့ဖုနျးကို မှတျပုံတငျရမှာ ဖွဈပါတယျ။ မိုဘိုငျး ဆကျသှယျမှု မရခြိနျမှာ Login ဝငျနိုငျအောငျ Backup codes မြားကို သတျမှတျထားပါ။ Backup code ၁၀ ခုကို ဖနျတီးထားနိုငျပွီး တဈခုကို တဈခါသာ သုံးနိုငျပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ Microsoft အကောငျ့ကို Login ဝငျပါ။ Security Settings ထဲသှားပွီး 2FA ကို Enable လုပျပါ။ အပျေါကလိုပဲ သငျ့ဖုနျးကို မှတျပုံတငျရမှာ ဖွဈပါတယျ။ မိုဘိုငျး ကှနျရကျ မရခြိနျမှာ သုံးဖို့ App passwords မြားကို ဖနျတီးထားပါ။ App password တဈခုကို တဈကွိမျသာ သုံးနိုငျပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ Dropbox အကောငျ့ကို Login ဝငျပါ။ Settings> Security ထဲသှားပွီး Two-Step Verification ကို Enable လုပျပါ။ သငျ့ဖုနျးကို မှတျပုံတငျပေးပါ။
ခရီးသှားတဲ့ အခါ ၊ မိုဘိုငျး ဆကျသှယျမှု မရတဲ့ အခါမြားမှာ သငျ့ဖုနျးကနေ ဒုတိယ Password or Code ကို မရရှိနိုငျပါဘူး။ အဲဒီ အခွအေနမှော အပျေါမှာ ဖျောပွထားတဲ့ Recovery code, Backup codes, App passwords မြားကို သုံးနိုငျသလို နောကျထပျ ရှေးခယျြစရာ တဈခုက Authenticator Apps မြား ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီ App မြားက မိုဘိုငျးဆကျသှယျမှု မလိုအပျဘဲ သငျ့ ဖုနျးမှာ ဒုတိယ Password မြားကို ဖနျတီးပေးနိုငျပါတယျ။ Android အတှကျ Google Authenticator , Authy နဲ့ iOS အတှကျ HDE OTP ကို သုံးနိုငျပါတယျ။ Facebook Mobile App မြားမှာတော့ Code Generator ပါရှိပွီးသား ဖွဈပါတယျ။
Xiaomi က 32GB Mi 6X ကို ရောင်းချ
Infinity Display , Dual Rear Camera များပါတဲ့ Samsung Galaxy A9 Star များကို ရောင်းပြီ